Maqaalkaan waxa uu ku socdaa Dhul. halkaan ka daalaco ciwaan shaabaha eeh Meere.
Tellus or Telluris, Gaia
1.57869° ee xagal toosan
Dhulka (Af-Ingiriis: earth, Af-Carabi: أرض) waa meereha sadexaad ee qoraxda u dhow ee Bahda Midaysay Qoraxdu. Waa meeraha ugu muga iyo miisaanka weeyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weeyn sideedda meere eeBahda Qoraxdu Midaysay. Dhulka waxa lagu naaneeysaa Meeraha Midabka Buluugan sababtoo ah marka hawoda sare laga soo fiirinayo waxa muuqda midabka buluuga.
Dhulku waa meereha kaliya ee nolol ka jirto dhamaan meereyaasha aan naqaano. Waxa lagu qiyaasaa meeraha dhulka in da'diisu ku dhowdahay 4.5 bilyan oo sanno. Dhulka isku-wareegiisa (Circumference) waa 40,007.86 km marka laga xisaabayo dhul badheha, sidoo kale baaxada guud ee oogada dhulku waa 510,072,000 km2 - taas oo ka kooban 148,940,000 km2 dhul ama caro iyo dhagax ah una dhiganta 29.2 %; iyo 361,132,000 km2 biyo iyo bad ah, taas oo u dhiganta 70.8 %.
Muga dhulku waa 1.08321 ×10 12 km3 halka cufka meeraha dhulku yahay 5.97219 ×10 24 kg. Sidoo kale, miisaanka cuf ee dhulku waa 5.515 g/cm3, halka cufisjiidadka dhul badhehu yahay 9.780327 m/s2 taas oo u dhiganta 0.99732 g. Cadaadiska dunidan waa 101.325 kPa (MSL).
Heerkulka oogada sare ee dhulku waa meel dhexaad taas oo ah mida taageertay in nolol ka jirto meerehan. Kulka iyo qaboowga dhulku wuu kala duwan yahay ayadoo Cidhifyada (polars) oogu heerkul hooseeyo taas ka dhigtey qaboow badan, laakiin meelaha ku beegan dhul badheha ayaa ugu heerkul sareeya dunida.  Guud ahaan, heerkulka dunidu marka ugu hooseeyo wuxuu gaadhaa 184 K ama −89.2 °C, dhex-dhexaad markuu yahay heerkulku waa 15 °C ama 288 K, marka uu ugu sareeyo kuleeylku wuxuu gaadhaa 56.7 °C ama 330 K.
Meeraha dhulku wuxuu sameeyaa labo wareeg: mid uu ku wareego xariijintiisa taas oo loo yaqaano Sidereal rotation period oo ku qaadata wakhti dhan 23 saacadood, 56 daqiiqo iyo 4.100 ilbiriqsi taas oo ku dhow 24 saacadood oo ah habeen iyo maalin. Wareega labaad dhulku wuxuu ku sameeyaa qoraxda waxaanay ku qaadataa 365.25744 maalmood oo ah wakhti dhan hal sanad.
1 Taariikhda Dhulka
1.1 Samayska Dhulka
1.2 Bilowgii Nolosha
1.3 Mustaqbalka Dhulka
2 Qeeybaha Dhulka
2.1 Qaab-dhismeedka Dhulka
2.1.1 Qolofka Dhulka
2.1.2 Lakabka Dhexe Dhulka
2.1.3 Ubuc Dhul
2.2 Wareega Dhulka
2.3 Dayaxa Dhulka
2.4 Qaaradaha Dunida
2.5 Qoraxda Dhulka
3 Cimilada Dunida
3.1 Cirka Dhulka
3.2 Cimilada Dhulka
4 Nolosha Dunida
4.1 Kheyraadka Dabiiciga iyo Isticmaalka Dhulka
4.2 Khatarta Dabiiciga
5 Bani' Aadamka